iPhone 13 uye iPhone 13 Mini, tinokuudza zvese zvese | IPhone nhau
Miguel Hernandez | 16/09/2021 00:51 | Yakagadziridzwa ku 23/09/2021 09:57 | iPhone 13, Noticias, IPhone Zviteshi
Apple yadzoka kubheja pane dzakateedzana zvatanga zvatanga tichiongorora zvakadzama pano muActualidad iPhone, senge iyo Nhepfenyuro dzeApple 7, una nyowani iPad renji kana kunyangwe iyo iPhone 13 Pro, saka ikozvino isu tinofanirwa kutaura nezve yakanyanya yechinyakare uye yakajairwa terminal yeiyo firm.
Iyo iPhone 13 uye iPhone 13 Mini vakagamuchira kugadziridza kunonakidza, kunyangwe kunze vachiita kunge vasina kuchinja zvakanyanya, zvinovanza zvimwe zvitsva. Tsvaga nesu zvese zvese zveiyo iPhone 13 kuitira kuti iwe uzive zvakadzama mhando nyowani yezvigadzirwa kubva kuCupertino kambani.
1 Notch kudzikisira uye kugadzirisa screen
2 Mamwe masimba uye matsva matsva
3 Iwo makamera ndivo protagonists
4 Zvimwe zvakasara zvacho zvinosara
5 Une makambani api aunogona kutenga iyo iPhone 13?
Notch kudzikisira uye kugadzirisa screen
Iyo nyowani Apple chishandiso chinoda kugara nhaka dhizaini yehama yayo iyo iPhone 12, saka inochengetedza 6,1 inches. Kuti uite izvi, simudza jira kumberi OLED Super Retina XDR pamwe nekuenderana kwe Dolby Vision muchiyero che19,5: 9, nezvose izvi takasvika resolution ye 2532 X 1170 uye nekudaro kuwanda kwema 460 pixels pa inch. Zvekare Apple kubheja pane 60 Hz mwero wekuvandudza, Uye chinhu ndechekuti zvakawanda zvinotaurwa nezve iyo 120 Hz iyo Apple mapaneru ichakwira, asi izvi zvakachengeterwa iyo "Pro" vhezheni ye iPhone. Muchiitiko cheiyo iPhone 13 Mini isu tine 5,4-inch pani, ine 2340 x 1080 resolution iyo inopa 476 pixels pa inch ye density.
IPhone 13 Zviyero: 146,7 X 71,5 x 7,6 mm
Kurema kwe iPhone: 173 gramu
IPhone 13 Mini zviyero: 131,5 x 64,2 x 7,6 millimeter
IPhone 13 Mini Kurema: 140 gramu
Imwezve tsananguro yeichi chikamu chepamberi ndechekuti iyo "notch", pamusoro pekubatanidza iyo vhezheni 2.0 yeFace ID, ikozvino ine hupamhi hwaderedzwa ne20%, zvisinei, inoramba iine urefu hwakaenzana, saka nzvimbo inoshandiswa yekrini inoramba yakada kufanana neyakadhindwa ye iPhone. Zvirokwazvo Apple yasarudza kudzikisa ino nocht, iyo yakaendesa mutauri kunzvimbo yepamusoro pechidzitiro, chimwe chinhu icho mamwe makambani enhare anga achiita kwenguva yakati, mukushayikwa kwekuziva kana mhando yeodhiyo ichichengetwa mune ino chikamu. .
Padanho rehunyanzvi, Apple haina kugovana hapana ruzivo nezve RAM, senguva dzose, saka tichamirira shamwari dze iFixit ita ongororo yako yekutanga, kunyangwe ichifungidzirwa kuti ichave iine 6 GB ye RAM, chaiyo 2 GB isingasviki pane "Pro" vhezheni ye iPhone. Panyaya yekugadzirisa, iyo A13 Bionic processor inogadzirwa neTSMC uye kuti Apple yakaratidza seye yakasimba kwazvo processor ine GPU yakabatanidzwa yemafoni pamusika inobuda, mubvunzo watisingazokwanise kukurukura nawo.
Mamwe masimba uye matsva matsva
Mune ino kesi, Apple yasarudza NPU Neural Injini chizvarwa chechina icho chinobatsira kutora mafoto uye kuita kweAugmented Reality nemavhidhiyo mitambo. Ehezve, chimwe chezvishamiso zvikuru zvinouya mukuchengetedza, kune iyi iPhone 13 renji Apple yakasarudza kutanga kubva 128 GB, zvakapetwa neiyo 64 GB inopihwa muiyo iPhone 12 uye ichipa dzimwe mbiri dzimwe nzira dzinoenda kuburikidza ne 256 GB uye 512 GB, chitsva icho vashandisi veIOS pasina mubvunzo vanoenda kuombera.
Muchikamu chehunyanzvi padanho rekubatanidza, Apple yanga ichidawo kugara ichienderana, nekuti izvi zvayashandisa WiFi 6E pane ichi chishandiso, icho chava kuitika Ichokwadi chakakura-chakasiyana 5G pane ese mavhezheni eiyo iPhone uye chii chinochengeta iyo NFC. Ehezve, ikozvino tinogona kuva DualSIM kuburikidza neSIM inosvika ku5G pamakadhi ese ari maviri, inogona kuva nhanho yekutanga yakananga kuchinhu chisina zviteshi. Zviripachena, iyo nanoSIM kadhi slot inochengetwa, kune avo vasina mukana wekuva neSIM kubva kukambani yavo yenhare.
Iwo makamera ndivo protagonists
Padanho rekamera kunouya kumwe kugadziridza kukuru, module rekumashure ikozvino rinotora nzvimbo yakawandisa uye zvachinja marongero eema sensors, ayo anoenda kune dhizaini dhizaini, achitsiva yapfuura yakatwasuka, uye pasina kubatanidza iyo LiDAR sensor yakachengetwa zvakare yeiyo «Pro» renji. Iyo huru kamera iyo Wide Angle ine gumi nembiri MP ine aperture f / 12 uye neamberi optical mufananidzo kudzikamisa system (OIS). Yechipiri sensor ndeye 12 MP Ultra Wide Angle iyo mune ino kesi inokwanisa kutora 20% yakawanda mwenje pane vhezheni yapfuura yekamera uye kuti ine aperture f / 2.4. Zvese izvi zvichatibvumidza kunyora mu4K Dolby Vision, mu Full HD inosvika ku240 FPS uye kunyangwe kutora mukana weiyo "cinematic" mode iyo inowedzera kukanganisa kuburikidza nesoftware, asi inorekodha chete kusvika makumi matatu eFPS.
Kana iri kamera yekumberi, Apple inoenderera ichitora mukana weiyo Yechokwadi Kudzika system inoumbwa ne12 MP wide-angle sensor, ine f / 2.2 aperture, 3D ToF sensor uye LiDAR, iyo inobvumidza kurekodha mukufamba zvishoma nyore.
Zvimwe zvakasara zvacho zvinosara
Kutaura nezve kuzvitonga iyo nyowani iPhone 13 ine 20W inokurumidza kuchaja uye isina waya kuburikidza ne15W MagSafe. Kana zviri zvekushora, ivo vanobheja zvakare pachiyero IP68 uye yeCeramic Shield pagirazi repamberi, rinovimbisa kuve rakasimba pamusika. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, iyo iPhone inogona kuchengetwa kubva Chishanu Chishanu 17 uye ekutanga mayuniti achaununurwa kubva munaGunyana 24. Unogona kuitenga mumavara matsvuku, machena, matema, bhuruu uye pingi, yakavakirwa mune yakashandiswazve aluminium yechassis uye girazi rekumashure mune glossy fomati, kuchengetedza iyo matte ye "Pro" sezvazvinoitika pane dzimwe nhambo.
Iyi ndiyo ichave mitengo:
iPhone 13 Mini (128GB): 809 euros.
iPhone 13 Mini (256GB): 929 euros.
iPhone 13 Mini (512GB): 1.159 euros.
Sezvauri kuona, mitengo inochengetwa ichienzaniswa neyegore rapfuura, chimwe chinhu chekutarisa nekuda kwekushomeka kwemamiconductor uye kuwedzera kwemitengo yekugadzira. Tichakuunzira yedu yakadzama ongororo munguva pfupi, gara wakatarisana.
Une makambani api aunogona kutenga iyo iPhone 13?
Vamwe veanoshanda maunogona kutenga nawo, izvozvi, iyo iPhone 13 iri Movistar, Vodafone, Orange uye Yoigo. Kuti uwane iyo smartphone, iwe unofanirwa kuve mutengi weanoshanda uye nekuhaya imwe yemitengo yavo, ingave inoshandura kana nhare chete.
Mitengo ye iPhone 13 ichasiyana zvichienderana nemodeli yaunosarudza uye nekambani yenhare, sezvakaratidzwa na Roams. Somuenzaniso, en Vodafone ine yakachipa pashiri sarudzo pamusika weiyo 128GB iPhone mini kwe € 702. Kune avo chikamu, Movistar neOrange vanopa iyi imwecheteyo modhi yemari ingangoita € 810. Nezve iyo iPhone 13, Vodafone ndiye zvakare anopa yakachipa nzira. Mutengo weiyo iPhone 13 ine 256GB muBritish opareta ndeye € 909.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » iPhone 13 uye iPhone 13 Mini, tinokuudza zvese zvese
Sonos Beam neDolby Atmos izvozvi chave chinhu chaicho
Kwete, iyo iPhone 13 hairatidzi bhatiri muzana mune mamiriro bar